प्रेम, विवाह र यौनबारे आहुतीः के हो प्रेम, के होइन ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रेम, विवाह र यौनबारे आहुतीः के हो प्रेम, के होइन ?
१) धेरैले प्रेमको विषयमा आ—आफ्नै परिभाषा दिइरहेका हुन्छन् । तपाईँलाई चाहीँ प्रेम भनेको के हो भन्ने लाग्छ ?
नीजि सम्पत्तिको जन्म भइसकेपछि त्यो आफुले जीवनभर लुटेर जम्मा गरेको वा छलेर जम्मा गरेको नीजि सम्पत्ति आफु मरिसकेपछि आफ्नै मान्छेको हातमा जाओस् भन्ने चाह्यो, त्यो पुरुषले ।आफ्नै मान्छेको हातमा जानका निम्ति उसले चाहीँ आफ्नै बच्चा हो भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो । आफ्नै बच्चा हो भन्ने ग्यारेन्टी गर्नका निम्ति त्यस्ती महिला उसलाई चाहियो जो अरुसँग नजाओस् । आफैसँग मात्रै बसोस् । त्यसले गर्दाखेरी शुरुमा विवाह भनेको लुटेर शुरु भयो ।
अब जब पुँजीवादको युग शुरु भयो, आजभन्दा ४/५ सय वर्ष अगाडी जब जर्ज स्टेफेन्सनले बाफबाट भल्ने इन्जिनको आविष्कार गरे त्यसपछि घरेलु रुपमा काम गरिरहेका दस्तकारहरु र व्यापारीहरु मिलेर उद्योगको निर्माण हुन थाल्यो । कपडा कारखानाहरु बन्न थाले । तानहरु जो व्यक्तिले चलाउँथे अब धेरै वटा तान राखेर एउटै इन्जिनले घुमाइदिने भयो । र हजारौँ हजार थान कपडाहरु निस्किन थाले । सबै चिजमा उत्पादन बढ्न थाल्यो । ठुला ठुला कारखानाहरु चल्न थाले ।
याे पनि पढ्नुस तल्लो जातसँग विवाह गरेको भन्दै माइतीपक्षबाट युवती अपहरण
—नेपाली समाज वा अर्को देशको समाज भन्दा पनि त्यो समाजको चरित्र कस्तो हो भन्नेमा भर पर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वा छनौटको अधिकार भनेको पूँजीवादी समाजमा मात्रै हुन्छ । पूँजीवादी समाज भन्दा अगाडीका अथवा सामन्तवादी समाजमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुँदैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नभएपछि त प्रेमको स्वतन्त्रता हुने कुरै भएन । पूँजीवादी समाजमा मात्रै प्रेमको स्वतन्त्रता हुन्छ ।
३०/३५ सालमा नेपालमा महिलाहरुले पाइन्ट लाउने भन्ने कुरा ठुलो विद्रोहको कुरा थियो । मेरो गाउँमा ३ जना दिदीबहिनीहरुले पाइन्ट लगाको २ जनाको त बिहे नै भएन पाइन्ट लगाकै हुनाले । तिनीहरुले त्यो पाइन्ट लगाएर सबै गाली खाइदिएको हुनाले नै अहिले नेपालको प्रत्येक सदरमुकाममा महिलाहरुले जिन्स लगाउँदा खेरी कसैले केही भन्न नसक्ने भाको हो । त्यसकारणले यो त क्रमश समाजमा विद्रोहीहरुले नै यहाँसम्म ल्याएका हुन् ।
१७) सँधै तपाईँको समाज बारे, इतिहास बारे विचारहरु सुनिराखेको तर आज चाहीँ अलि फरक कुराकानी भयो । विशुद्ध प्रेमकै विषयमा केन्द्रित भयौँ र पछिल्लो केही मिनेट चाहीँ युवाको विषयमा कुरा ग र्‍यौं । तपाईँ आफैलाई चाहीँ कस्तो महसुस भयो आज ?
थाहा सञ्चार नेटवर्कमार्फत सोमबार राती सवा ९ बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मनमा साहित्यकार आहुतिसँग महावीर विश्वकर्माले गर्नुभएको कुराकानी ।
ट्याग्स: आहुती, प्रेम, बहकिने मन, यौन, विवाह